Akekho ongakhali ngowaKwaMashu otholwe entanta edamini | News24
Akekho ongakhali ngowaKwaMashu otholwe entanta edamini
Durban - Kumuncu endaweni yaKwaMashu esigcemeni sakwa-D ngokudlula emhlabeni kwaSandile Mbense oneminyaka engu-31 ubudala otholwe entanta edamini eHazelmere.
UMbense ubehambele umcimbi wodumo eThekwini iDurban Jazz Festival ebanjelwa kule ndawo.
Kubikwa ukuthi ubehambe nabangani bakhe eyozijabulisa kanye nabo kanti angeke esabuya nabo.
Kuthiwa le nsizwa ebinogazi ivele yanyamalala kwaze kwashaya isikhathi sokuba kugodukwe ingaziwa, abebehamba nayo bazitshela ukuthi ihambe nabanye abantu njengoba yenza nangonyaka odlule kanti kulokhu akunjalo.
Kuzwakale nokuthi uMbense ubengena yonke indawo ekwazi ukubonana nabo bokne abaziyo abebehambele lo mcimbi njengoba ebefake ibhande okwazi ukungena ngalo yonke indawo kubalwa neyezicukuthwane.
OLUNYE UDABA:Kuminze umfundi kamatikuletsheni ebhukuda nabangani
AbeziNdaba24 bakhulume noNgcebo Mdima ongumngani kaMbense ongomunye wabakade behambe naye, uthi kunzima kuye futhi ubengakholwa aze ahambe ayohlonza isidumbu sikaMbense ehambisana nomshana wakhe uThabiso Mdlalose.
UMdima uthi wabikela amaphoyisa ngodaba ngomhlaka-27 Disemba, kwathi ngoLwesine wangomhlaka-28 Disemba wayohlonza isidumbu.
Uthi njengamanje icala liphenywa ngamaphoyisa esesiteshi saseVerulam kulandela ukuvulwa kwedodoko.
Ngokombiko weSolezwe okhulumela amaphoyisa Captain Nqobile Gwala ukuqinisekisile ukutholakala kwesidumbu sikaMbense.
UGwala uthe isidumbu sitholwe sintanta emanzini endaweni engamamitha angu-30 eceleni nedamu.
Udaba luphenywa abaseshi basesiteshini samaphoyisa aseVerulam, kusho uMbele.